Reggae on! Jamaica Tourism Yakachengeteka kunyangwe nemitemo mitsva yekudzokera kumba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Reggae on! Jamaica Tourism Yakachengeteka kunyangwe nemitemo mitsva yekudzokera kumba
Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Nedzimwe dzakachengetedzeka dzese dzakabatanidzwa nzvimbo dzekugara pasi rese seSandals neBeach boka, kushanya muJamaica kuri kutarisirwa kuenderera mberi kuchikura kunyangwe mutemo mutsva wekudzokera kumusha wakaziviswa nhasi neMutungamiri weJamaica, Michael Holness.
Kuenzaniswa neUnited States iyo COVID-19 yakapararira, huwandu hwerufu, Jamaica iri kuita zvakanaka. Yakaverengerwa pamamirioni ehuwandu Jamaica iri pachinzvimbo 123 mupasi rose, zvichienzaniswa neUSA kutumirwa 14.
Jamaica yakabata kanenge 369,960 mishonga yemishonga yekudzivirira COVID kusvika ikozvino. Kufunga kuti munhu wese anoda madhizaini maviri, izvo zvakakwana kuti ubaye jekiseni nezvazvo 6.3% yevagari vemunyika. Iyi nhamba yakaderera ichienzaniswa nehuremu hunopfuura makumi mashanu muzana kuUSA.
Pakati pevhiki yekupedzisira yakataurwa, Jamaica yakaenzana nezve 4,933 doses yakapihwa zuva nezuva. Pamutengo iwoyo, zvinotora zvimwe 120 mazuva kupa zvakakwana doses kune imwe 10% yevagari.
Nepo miganhu ichiramba yakavhurika panguva iyoyo, uye kushanya kwakadzokera munyika ino yeCaribbean Island, nguva nyowani yekumisikidza yakagadzwa kutanga Nyamavhuvhu 11 kusvika Nyamavhuvhu 31.
Sezvo zvinotyisa sezvazvinonzwika, izvi zvinogona kunge zvisiri musiyano mukuru wevashanyi vanonakidzwa nezororo reJamaica munzvimbo zhinji dzakabatanidzwa dzakadai Sandals, asi yambiro yakajeka neMutungamiriri weJamaica, Michael Holness, kuti kutyisidzira kwe COVID-19 kuri kwechokwadi uye kuri kutaurwa nezvako.
Dhipatimendi reHurumende reUS riri kukurudzira maAmerican ari kuzororo muJamaica kuti vanyatsobaiwa jekiseni vasati vafamba.
Sangano reUS Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rakaburitsa Chikamu che3 Travel Health Cherechedzo yeJamaica nekuda kwe COVID-19, inoratidza yakakwira mwero we COVID-19 munyika. Iyo inoti: FDA yakabvumidzwa jekiseni. "
Nhasi Mutungamiriri weJamaica Andrew Holness azivisa akagadziridza maCovid-19 maprotocol pasi peDisaster Risk Management Act.
Achitaura kumusangano wenhau wedhijitari nhasi, Holness ati matanho matsva achashanda kwemavhiki matatu kubva Chitatu, Nyamavhuvhu 11 kusvika Nyamavhuvhu 31.
Akazivisa kuti kutanga kwaAugust 11, husiku husiku hwekusvika pamba uchatanga kubva pa7 pm kusvika 5 am kubva Muvhuro kusvika Chishanu.
#Michato - Hapana vanhu vanopfuura makumi mashanu vanobvumidzwa kuenda kumuchato.
YeGore Negore & Inoshamisa Misangano Yese yeZvivakwa, iyo yakanyanya kuwanda yevanhu vanobvumidzwa kuenda panyama ndeye 50. pic.twitter.com/So7oDMOCUe
Musi weMugovera, nguva yekudzoka kumba ichatanga kubva na6 pm kusvika na5 am mangwana acho, nepo paSvondo curfew ichatanga kubva 2 pm kusvika 5 am mangwana acho.
Mabhizimusi anozodikanwa kuti vavhare awa imwe nguva yekugadzika isati yasvika.
Dzimwe nhanho dziri kuziviswa izvozvi nemutungamiriri wehurumende.
Kubva China rapfuura, huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 zuva nezuva zvakapfuura mazana maviri, uye kwemazuva matatu, yakakwira kusvika pamatare anodarika mazana matatu. Zvipatara zvakare zviri kumanikidzwa sezvo nzvimbo dzemubhedha dzaganhurirwa.
Pakutanga, Holness akadhirowa mufananidzo wakashata weJamaica's COVID-19 mamiriro nekuburitsa pachena kuti mazana mapfumbamwe mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nematatu emakesi ehutachiona akanyorwa pakati paAugust 1,903 naNyamavhuvhu 1.
Nekuda kweizvozvo, 238 COVID kesi dzakanyorwa paavhareji pazuva.
Holness akapa mhosva kukwira kwemaJamaicans kusingaite maererano nemitemo yeCOVID-19, kusanganisira kuremara munharaunda nekuteerera matanho ekudzoka kumba.
"Hunhu hwemhando iyi hunotungamira mukukwira kwenyaya," akadaro, achiona kuti Hurumende yaitarisira kukwira kwezviitiko, zvichizoguma nekusimbiswa kwematanho ekudzivirira hutachiona.
eTurboNews yakasvika kuna Hon. Gurukota rezvekushanya Edmund Bartlett kuti ajekeswe, asi akatadza kuwana mhinduro, uye achadzokorora zvakare zvakare kuzivikanwa.
Hapana munhu akachengeteka kudzamara isu tese takachengeteka haisi chete kuongororwa neMutungamiri weUS Biden, asiwo na Edmund Bartlett, Gurukota rezvekushanya kuJamaica. Iye anotenda zvine simba kuti kugoverwa kwepasirese kwejekiseni kune wese munhu ndiko kiyi. VaBartlett vanga vachirwira kushomeka kwenyika kunyanya mubazi rekushanya nekushanya, senge Jamaica mukusagona kuwedzera kupararira kwejekiseni.
Akakudzwa Kwazvo Andrew Michael Holness akatanga kusarudzwa senhengo yeparamende (MP) kunomiririra dunhu reWest Central St. Andrew mu1997, aine makore makumi maviri nemashanu. Zvino mune rake rechina akateedzana seParamende, VaHolness vakave vechipfumbamwe cheJamaica. Mutungamiriri mushure meJamaica Labor Party yakakunda iyo People's National Party munzvimbo dzekuvhotera muna Kukadzi 25, 25.